Home Child Care ကလေးငယ်တွေ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်မှုဖြစ်စေအောင် မိဘတွေ ပြုလုပ်မိတဲ့ အချက် (၇) ချက်
ကလေးငယ်တွေကို ရိုက်နှက်အပြစ်ပေးခြင်းဟာ မသင့်တော်ဘူးဆိုတာကို မိဘတွေတော်တော်များများ သိနားလည်ထားကြပေမယ့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်နာကျင်စေမှုတွေကိုတော့ သတိမထားမိတတ်ကြပါဘူး။ စိတ်ပညာရှင်တွေရဲ့ အဆိုအရ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်နာကျင်စေတာဟာ ရိုက်နှက်အပြစ်ပေးခြင်းထက် ကလေးငယ်တွေအပေါ် ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုရှိစေတယ်လို့ သိရှိရပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ သားသား၊ မီးမီးတို့ရဲ့ မေမေတို့၊ ဖေဖေတို့ သတိထားမိကြစေဖို့အတွက် ရှောင်ရှားရမယ့် အချက် ၇ ချက်ကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
၁။ အခြားသောကလေးငယ်များနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ပြောဆိုခြင်း
မိဘအများစုဟာ မိမိတို့ရဲ့ ကလေးငယ်ကို မခံချင်စိတ်၊ ကြိုးစားချင်စိတ်၊ အခြားသောကလေးငယ်တွေထက်
တော်တတ်စေချင်တဲ့စိတ်နဲ့ ပိုပြီးတော်တဲ့ အခြားသောကလေးငယ်တွေနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ပြောဆို ဝေဖန်လေ့ရှိကြပါတယ်။ ဒါဟာ မိမိတို့ရဲ့ ကလေးငယ်ကို အရှက်ရသိမ်ငယ်စိတ်တွေဝင်သွားစေနိုင်ပြီး မိမိကိုယ်ကို အရှုံးသမားတယောက်လို ခံစားသွားစေနိုင်ပါတယ်။ ကလေးငယ်တိုင်းမှာ ပင်ကိုယ်ထူးချွန်မှုတွေပါရှိလာပြီးသားမို့ မိမိတို့ရဲ့ ကလေးငယ်ဟာ ဘယ်လိုနေရာမှာ ထူးချွန်တယ်ဆိုတာကို အဖြေရှာပြီး ပိုပြီးထူးချွန်ထက်မြက်လာစေဖို့ကိုဘဲ အာရုံစိုက်သင့်ပါတယ်။ ဒီလိုနှိုင်းယှဉ်ပြောဆိုတာမျိုးဟာ မိသားစုအတွင်း ညီအကို၊ မောင်နှမချင်းလည်း မပြုလုပ်သင့်ပါဘူး။ သူတပါးနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ပြီး ဝေဖန်ပြောဆိုခံရတဲ့ကလေးငယ်တွေဟာ ကြီးပြင်းလာတဲ့အခါမှာ စိတ်ကျရောဂါလက္ခဏာတွေ ပိုပြီးဖြစ်လာတတ်ကြတဲ့အပြင် မှန်ကန်တဲ့ တွန်းအားပေးခြင်းမျိုးလည်းမဟုတ်တဲ့အတွက် ရှောင်ကြဉ်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
၂။ ကလေးရဲ့ စိတ်ခံစားချက်ကို အလေးမထားခြင်း
သူတို့ရဲ့ ကစားစရာလေး ဒါမှမဟုတ် သူတို့နှစ်သက်တဲ့ အရာလေးကျိုးပဲ့သွားလို့ တအီအီငိုကြွေးနေတာမျိုးကို မိဘတွေ ကြုံဖူးကြပါလိမ့်မယ်။ ပြန်ဝယ်ပေးမယ်၊ ပြန်လုပ်ပေးမယ်ပြောတာတောင်မှ မတိတ်နိုင်ဘဲ ငိုကြွေးနေလို့ မိဘတွေအနေနဲ့ စိတ်မရှည်နိုင်ဖြစ်ပြီး ဒေါသထွက် အော်ငေါက်ပြောဆိုမိတာမျိုးလည်း လုပ်မိတတ်ကြပါတယ်။ လူကြီးတွေအတွက်တော့ ဒီလိုအရာလေးတွေဟာ ဘာမှမဟုတ်ဘူးလို့ ထင်ရပေမယ့် ကလေးငယ်တွေအတွက်တော့ မတူတာကို သတိထားစေချင်ပါတယ်။ ကလေးငယ်တွေဟာလည်း သူတို့ရဲ့ သိရှိမှုအတိုင်းအတာနဲ့အတူ ဝမ်းနည်းမှု၊ ပျော်ရွှင်မှု၊ အမျက်ဒေါသထွက်မှု အစရှိတာတွေကို ခံစားတတ်ကြတဲ့အတွက် ဂရုစိုက်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ငယ်စဉ်ကတည်းက သူတို့ရဲ့ ခံစားချက်တွေကို အလေးမထား၊ လျစ်လျူခံရတဲ့ ကလေးငယ်တွေဟာ ကြီးပြင်းအရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာ ပတ်ဝန်းကျင်အသိုင်းအဝိုင်းနဲ့ တည်ငြိမ်တဲ့ဆက်ဆံရေးကို တည်ဆောက်နိုင်ခြင်း မရှိကြတော့ပါဘူး။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာခံစားချက်တွေကိုလည်း ခံနိုင်ရည်မရှိကြတောတဲ့အပြင် စိတ်ဓါတ်ကျခြင်း၊ စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းတွေနဲ့သာ ပြည့်နှက်နေရပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့်မို့ အရုပ်ကလေးကျိုးပဲ့သွားလို့ ဝမ်းနည်းနေတဲ့ကလေးငယ်ကို ချော့မြူမနှစ်သိမ့်ပေးနိုင်ရင်တောင်မှ သူတို့ရဲ့ဝမ်းနည်းမှုကို မာန်မဲစကားမဆိုမိကြဖို့အတွက် ဂရုစိုက်ပေးစေချင်ပါတယ်။
မိဘတွေဟာ ကလေးငယ်တွေကို ကတိ တွေလွယ်လွယ်ပေးပြီး လွယ်လွယ်ဘဲ ချိုးဖောက်တတ်ကြပါတယ်။ မိဘတွေရဲ့ နေ့စဉ်လူမှုပတ်ဝန်းကျင်မှာ စီးပွားရေးကိစ္စ၊ လူမှုရေးကိစ္စတွေများမြောင်တာမှန်ပေမယ့် ကလေးငယ်တွေဟာ မိဘတွေ
ကတိပေးထားတဲ့အရာတွေကို မမေ့မလျော် မျှော်လင့်နေတတ်ကြပါတယ်။ ကိုယ်အရမ်းမျှော်လင့်ထားတာမျိုးတွေဖြစ်မလာတဲ့အခါ ဘယ်လောက်ထိ စိတ်ပျက်ဝမ်းနည်းစရာကောင်းတယ်ဆိုတာကို မိဘတွေသိကြမှာပါ။ ဒါဆို နုနယ်တဲ့ ကလေးငယ်တွေစိတ်ထဲမှာဆို ဘယ်လောက်ထိ ပိုပြီး ဆိုးဝါးသွားနိုင်မလည်းဆိုတာကို မိဘတွေ ခန့်မှန်းလို့ရနိုင်မယ်ထင်ပါတယ်။ ကတိပေးထားတာတွေ ပျက်တာများလာတဲ့အခါ ကလေးငယ်တွေဟာ မိဘတွေအပေါ် အယုံအကြည်မဲ့လာပြီး ကတိစကားနဲ့ပတ်သတ်တဲ့အခါ ဘာခံစားချက်မှ မရှိတော့တာမျိုး ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ ပိုပြီးဆိုးတာက မျှော်လင့်ထားတာတွေ ဖြစ်မလာတတ်တာကို စိတ်စွဲသွားကြရင် ကြီးပြင်းလာတဲ့အခါမှာ မျှော်လင့်ချက်မဲ့ အရှုံးသမားတယောက်လို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ခံယူသွားတတ်ကြပါတယ်။ ဒါ့အပြင် မိဘတွေရဲ့ ချစ်ခြင်းကို မခံစားရဘူးလို့ ထင်မြင်ခြင်း၊ ဆိုဆုံးမဖို့ ခက်ခဲလာခြင်း၊ တဇွတ်ထိုးဆန်လာခြင်း၊ ကိုယ်ချင်းစာစိတ်နည်းပါးခြင်း အစရှိတဲ့ နောက်ဆက်တွဲ ဆိုးကျိုးတွေပါ ဖြစ်လာတတ်တာမို့ ကတိတွေကို လွယ်လွယ်မပေးဖို့နဲ့ ပေးပြီးသားကတိကို တည်စေဖို့လည်း လိုအပ်ပါတယ်။
၄။ လွဲမှားတဲ့ တွန်းအားပေးစကားများ
ကလေးငယ်တွေကို အောင်မြင်မှုရရှိစေဖို့၊ ကောင်းမွန်တဲ့ အနာဂတ်ဘဝကို ပိုင်ဆိုင်ကြစေဖို့အတွက် မိဘတွေဟာ တွန်းအားပေးတတ်ကြပါတယ်။ ဒါဟာ သူတို့ရဲ့ အနာဂတ်အတွက်၊ သူတို့ဘဝ ကောင်းစားစေချင်တဲ့အတွက် ပြုလုပ်ရခြင်းဖြစ်တယ်လို့ မိဘတွေတော်တော်များများက ခံယူထားတတ်ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် “မင်းသာ အောင်မြင်မှုမရှိရင်၊ မင်းသာ ပိုက်ဆံမရှိရင်၊ မင်းသာ အဆင့် ၁ မရရင်၊ မင်းသာ စာမတော်ရင် ဘယ်လိုလူတွေကမှ မင်းကိုဂရုစိုက်ကြမှာ မဟုတ်ဘူး၊ ချစ်ကြမှာ မဟုတ်ဘူး” ဆိုတဲ့ လွဲမှားတဲ့ တွန်းအားပေးခြင်းမျိုးကတော့ သူတို့ဘဝကို ကောင်းကျိုးထက် ဆိုးကျိုးပိုများစေပါလိမ့်မယ်။ ဒီလိုတွန်းအားပေးခြင်းတွေဟာ ချစ်ခြင်းမေတ္တာကို အယုံအကြည်ကင်းမဲ့စေပြီး တကိုယ်ကောင်းဆန်၊ အတ္တကြီးတဲ့ သူတယောက်ဖြစ်သွားစေပါလိမ့်မယ်။ ပိုက်ဆံတွေ၊ အောင်မြင်ကျော်ကြားမှုတွေဟာ အရာတော်တော်များများကို လုပ်ဆောင်လို့ရတယ်ဆိုတာမှန်ပေမယ့် စစ်မှန်တဲ့ချစ်ခင်ရင်းနှီးမှုမျိုး၊ ချစ်ခြင်းမေတ္တာမျိုးကိုတော့ မပြုလုပ်နိုင်ပါဘူး။ စစ်မှန်တဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာနဲ့ ရင်းနှီးမှုတွေကို မခံစားရတဲ့သူတယောက်ဟာ ဘဝကို ကျေနပ်ရောင့်ရဲစိတ်၊ စစ်မှန်တဲ့ပျော်ရွှင်မှု အစရှိတာတွေကို မခံစားရဘဲ အထီးကျန်ခြင်း၊ လိုအင်ဆန္ဒမပြည့်ခြင်း အစရှိတဲ့ ခံစားချက်တွေနဲ့သာ ဘဝကို အချည်းနှီးကုန်ဆုံးသွားရနိုင်ပါတယ်။
၅။ အားနည်းချက်တွေကို အမြဲလို ဝေဖန်ခြင်း
ဒီလိုအပြုအမျိုးဟာ ကလေးငယ်တွေကို ကူညီရာမရောက်ဘဲ ဆန့်ကျင်ဘက်အကျိုးသက်ရောက်မှုသာ ဖြစ်စေပါတယ်။ ကလေးငယ်ရဲ့ စွမ်းဆောင်နိုင်မှုအပေါ် အားပေးချီးမြှောက်မှုမရှိဘဲ အားနည်းချက်တွေကို အမြဲလိုရှာဖွေပြီး ဝေဖန်ပြစ်တင်တာမျိုးဟာ သူတို့ကိုယ်သူတို့ ယုံကြည်မှုပျက်ပြားသွားစေပြီး ဘယ်လိုအရာမျိုးကိုမှ ကြိုးစားချင်စိတ်မရှိတော့အောင် ဖြစ်သွားစေပါလိမ့်မယ်။ ကြီးပြင်းလာတဲ့ အခါမျိုးမှာလည်း ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးကင်းမဲ့ခြင်း၊ စိုးရိမ်ပူပန်စိတ်များပြားခြင်းနဲ့ စိတ်ဓါတ်ကျခြင်း အစရှိတဲ့ ဆိုးကျိုးတွေကိုပါ ဖြစ်ပွားလာစေနိုင်တာမို့ ဒီလိုအပြုအမူမျိုးကိုလည်း ရှောင်ကြဉ်ဖို့လိုပါတယ်။
ရွယ်တူအချင်းချင်း ဒါမှမဟုတ် သူတို့ထက် အသက်အရွယ်ကြီးသူတွေရဲ့ လှောင်ပြောင်ပြောဆိုမှုတွေ၊ အနိုင်ကျင့်ခံရမှုတွေကို မိဘတွေကို အသိပေးပြောကြားပေမယ့် မိဘတွေရဲ့ အရေးတယူဖြေရှင်းပေးမှု၊ ဂရုစိုက်မှုတွေကို မခံရတဲ့ ကလေးငယ်တွေဟာ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဒါမှမဟုတ် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ထိခိုက်မှုမျိုးတွေ ဖြစ်သွားတတ်ကြပြီး အရာရာကို စိုးရိမ်ပူပန်ကြောက်လန့်စိတ်တွေ ဝင်သွားတတ်ကြပါတယ်။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်လည်း သူတို့ကိုယ်တိုင် အနိုင်ကျင့်တတ်တဲ့သူ၊ ဆိုးသွမ်းတဲ့စရိုက်ရှိသူတွေ ဖြစ်သွားတတ်ကြပါတယ်။ စိုးရိမ်ပူပန်တတ်သူဘဲဖြစ်ဖြစ်၊ အနိုင်ကျင့်တတ်သူဘဲဖြစ်ဖြစ် နှစ်မျိုးစလုံးဟာ လူမှုဆက်သွယ်ရေးနယ်ပယ်အတွက် မကောင်းမွန်တာမို့ အနာဂတ်ဘဝမှာ အောင်မြင်မှုတွေနဲ့ ဝေးကွာသွားစေနိုင်တဲ့အတွက် ဒီအချက်ကိုလည်း ဂရုပြုပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
၇။ လွဲမှား အပြစ်တင်စိတ်
မိဘတွေဖြစ်လာကြပြီဆိုရင်တော့ စွန့်လွှတ်အနစ်နာခံမှုကတော့ ရှိလာစမြဲပါဘဲ။ ကလေးငယ်တွေရှိနေလို့ စိတ်ရှုပ်ရတယ်၊ ပင်ပန်းရတယ်၊ စွန့်လွှတ်အနစ်အနာခံနေရတယ်ဆိုပြီး သူတို့ကို အပြစ်တင်လွှဲချတာမျိုး မလုပ်ဖို့လိုပါတယ်။ အပြစ်တင်တဲ့စကားမျိုးတွေ မပြောဖို့ လိုပါတယ်။ ကလေးငယ်တွေမွေးဖွားလာတယ်ဆိုတာက မိဘတွေရဲ့ ရွေးချယ်မှုကြောင့်သာဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ အပြစ်လုံးလုံးမဟုတ်တာကို သိနားလည်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ ဒီလို လွဲမှားတဲ့ အပြစ်တင်ဝေဖန်မှုတွေဟာ အချို့သော အခြေအနေမျိုးမှာဆို ကလေးငယ်တွေကို အာရုံကြောနဲ့ဆက်နွယ်တဲ့ ရောဂါတွေဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တဲ့အပြင် အဆိုးမြင်စိတ်ရှိတဲ့ လူတယောက်အဖြစ် ကြီးပြင်းသွားစေနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ မိဘတွေအနေနဲ့ ကလေးငယ်တွေကို လွဲမှားအပြစ်တင်စိတ်တွေ မပြုလုပ်ဖို့လည်း လိုအပ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းကို
Previous articleကလေးရဲ့အရည်အချင်းကို ခိုင်မာစေဖို့ နည်းလမ်း (၈)ခု
Next articleဘေဘီလေးတို့ရဲ့ အသားအရေကို ကျန်းမာစေဖို့ အထောက်အကူပြုနိုင်မယ့်နည်းလမ်း (၅) ခု
နေ့ရက်တိုင်းမှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်စိတ်အားတက်ကြွမှုကို ပေးနိုင်သော ပျော်ရွှင်ကလေးတစ်ယောက်ကို ပျိုးထောင်နည်း
ခေတ်သစ် မိဘအုပ်ထိန်းမှုက မိရိုးဖလာမိဘအုပ်ထိန်းမှုထက် ပိုကောင်းသလား?
မိဘတွေအနေနဲ့ ကလေးတွေရဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပူပန်မှုတွေကိုပါ ဘယ်လို ကာကွယ်ပေးနိုင်မလဲ?
Mom and Baby192
Nyein Thu - December 2, 2021 0